Iphupha malunga neFrench Fries Discover ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Iphupha Ngeetapile eqhotsiweyo. Ayaziwa ukuba kutheni abantu bephupha, kodwa namhlanje kuyaziwa ukuba amaphupha atyhila okuthile ngathi, ngenxa yesi sizathu kunomdla ukwazi indlela yokutolika amaphupha, kuba oku sicebisa ukuba uqhubeke nokufunda esi sikhokelo silula.
AmaFries aseFransi - Siyabathanda kwaye sibathiye ngokufanayo. Kuba xa uthe wawela kwisilingo kwaye wavula ibhegi yeetapile, awunakukhupha izandla zakho kuyo kwaye uyeke ukutya xa ibhegi ihambile.
Umnqweno wokutya okutyayo wanelisekile, isisu sigcwele, kwaye isazela esinetyala siyabonakala ngengomso kwangoko ngokujonga esikalini. Ngaba awufuni kuthathela ingqalelo ukutya okunokulinganisela kwaye ususe iilekese kunye nokutya okulula ngokupheleleyo kuluhlu lokutya okuvumelekileyo? Abanye abantu abakhathazeki kangako ngale micimbi. Bahlala ngokuthanda kwabo kwaye bahlala benciphile naxa besitya iikhalori ezingaphezulu mihla le.
Uninzi lwethu mhlawumbi luyazazi ezi meko okanye ezifanayo. Kwaye nokuba zininzi iintlobo zeetapile zetapile zekhalori eziphantsi namhlanje, kuyaziwa ukuba idosi ivelisa ityhefu. Kodwa ngubani onokuvala ibhegi ayibuyisele ekhabhathini emva kokuzama?
Kungenzeka nokuba ephupheni sifikelele kwiifries ezimnandi zaseFrance. Kodwa kutheni? Anokuthi ntoni amaphupha e-chip ngathi?
1 Uphawu lwephupha «iitshiphusi» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «Iichips» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «Iichips» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «iitshiphusi» - ukutolikwa ngokubanzi
Amaphupha apho uzibona usitya ngokubanzi abonisa iimvakalelo ezicinezelweyo kunye neemfuno ekuchazeni amaphupha. Umfanekiso wephupha «iichips» utolikwa ngendlela efanayo. Ukuba uluma iichips kwimeko ethile yephupha, oku kunokuthetha ukuba ujonge ukoneliseka endaweni. Iifries zaseFransi el mundo Amaphupha ngamanye amaxesha nawo abonisa umvuzo ophupha wona ngenxa yokuba awufumani oku kwabanye abantu okanye kuba ufuna ukuzenzela into elungileyo.
Ukuba ingxowa okanye isitya seetapile zetapile sithathiwe kuwe ephupheni, kunokwenzeka ukuba bakho abantu ebomini bakho bokwenene abanenqala ngovuyo nolonwabo kwaye ke ngoko basebenzise zonke iindlela ukonakalisa ubomi bakho. Nokuba imeko yamaphupha apho iifriji zaseFransi zityiwa kanye phambi kwempumlo yakho kufuneka zikwenze uhlale phantsi kwaye ubeke ingqalelo kubomi bokwenyani. Abantu ongakholelwa ukuba balinde ithuba lokuphosa ubomi bakho obuzolileyo ngaphandle kokulingana nezinto ezincinci ezimbi.
Ukulamba Inokukhokelela kwinto yokuba sidibana ephupheni kunye nengxowa yeetshipsi zeetapile kwaye yenza nemilomo yethu amanzi kwilizwe lamaphupha. Amafriji aseFransi angabonakala njengophawu lokulala, ngakumbi xa sele uza kutya kwaye ufuna ukunqanda naluphi na uhlobo lweelekese okanye iikhalori ezingafunekiyo.
Uphawu lwephupha «Iichips» - ukutolikwa kwengqondo
Ukuziva uzothekile ziichips kunokuthetha ukuba ngokwenyani njengamava ephupha ingxaki kufuneka ubonwabele ubomi kuzo zonke iinkalo. Eyona nto inokwenzeka, lowo uphuphayo ngumntu othobela kakhulu kwaye ongaguquguqukiyo ongafane azivumele ukuba akoyise.
Iichips zeetapile zinokucinezelwa njengomfanekiso wephupha kwaye zibonise iimfuno zesondo. Kunokubakho ukunqongophala okubonakalayo kwesini esiphilayo. Iphupha elo lilangazelela ixesha elithembekileyo lokwenyama.
Ukutya iichips zeetapile njengamava ephupha kunokwenza ukuba abo bachaphazelekayo baqwalasele ngakumbi kubo kwaye bangaphazanyiswa zizinto eziyimfuneko ngokwenza izinto ezinje.
Uphawu lwephupha «Iichips» - ukutolika kokomoya
Kutoliko olugqithisileyo lwamaphupha, uphawu lwephupha "iichips" nalo limela a isiphene. Ukuphupha ngoku kutya kuthetha ukuba kufuneka ukhule ngakumbi ngokomoya.